Vahaolana amin'ny fanavaozana ny olan'ny Oneplus 2 amin'ny alàlan'ny OTA | Androidsis
Raha minitra vitsy lasa izay dia namoaka izahay ny famerenana sy famakafakana ny Oneplus 2, iray amin'ireo terminal farany andrasana indrindra amin'ny taona, efa mandray fanontanina momba ny fantatra isika Oneplus 2 manavao ny olany amin'ny OTA, ny olana mitranga amin'ny fantsona sasany novidiana tamin'ny tranokala ivelan'ny tranokala Oneplus ofisialy,
Amin'ity lahatsoratra vaovao ity ho toy ny fampianarana azo ampiharina, na dia ampian'ny horonantsary manazava aza aho dia hampianatra anao ny fomba amboary ny olan'ny fanavaozana Oneplus 2 amin'ny alàlan'ny OTA, mampihatra an'ity fanavaozana vaovao voaray ity amin'ny alàlan'ny fampidinana azy amin'ny tanana ary amin'ny fampiharana azy amin'ny tanana, izay tsy hisy fiatraikany amin'ny fiantohana ofisialy ny terminal.
1 Fa maninona no tsy mandeha amin'ny Oneplus 2 ny fanavaozana ny OTA?
2 Ahoana ny fanamboarana ny olan'ny fanavaozana Oneplus 2 amin'ny alàlan'ny OTA
Fa maninona no tsy mandeha amin'ny Oneplus 2 ny fanavaozana ny OTA?
Ny antony Ny fanavaozana ny OTA dia tsy mandeha amin'ny maodely Oneplus 2 sasany, amin'ny ankapobeny dia izay ireo modely ireo dia mety ho nohararaotina, tsy misy fikasana fantatra, avy amin'ny fivarotana Sinoa an-tserasera Oneplus 2.
Raha mahita ny fanavaozana vaovao manodidina ny 2 mb ny Oneplus 40 antsika, ny fisintomana ary amin'ny fotoana famerenana azy io ho an'ny fametrahana azy, dia averiny amintsika ny hafatr'i tsy nahomby ny fametrahana vaovao farany, ny zavatra azo antoka indrindra dia ny fananantsika Oneplus 2 novaina tamin'ny iray amin'ireo fivarotana an-tserasera voalaza etsy ambony izay mivarotra azy ireo tsy mila fanasana. Ny antsipiriany iray izay hanome antsika ny famantarana fa novaina dia ny fampidirana a kinova taloha anao Tube app, izay miasa toy ny boriky ary tsy mamela antsika hanavao azy akory io na mazava ho azy fa esory izany satria tafiditra ao anaty rafitra io.
Avy eo, rehefa manazava ao amin'ilay horonan-tsary mifatotra eo an-tampon'ity lahatsoratra ity aho dia hanome anao ireo rakitra ofisialy diovy tanteraka ny Oneplus 2-tsika, ankoatr'izay dia havaozinay amin'ny kinova farany an'ny Oxygen OS 2.0.1 miaraka amin'ny fahalemena voahitsy ho an'ny roa tonta sehatra toy ny Vavahady Certifi-vavahady. Oh ary izany rehetra izany nefa tsy very ny antoka ofisialin'ny vokatra ary mamela ny fampiasa hahomby amin'ny fahazoana vaovao farany amin'ny OTA tsy misy olana !!.
Ahoana ny fanamboarana ny olan'ny fanavaozana Oneplus 2 amin'ny alàlan'ny OTA
Ny zavatra voalohany tsy maintsy hataontsika dia ny ampidino ny firmware farany navoakan'ny Oneplus mivantana ho an'ny Oneplus 2 anao mivantana avy amin'ity rohy ityary. Ity no Rom feno miaraka amin'ny firmware Oxygen OS 2.0.1 miorina amin'ny Android 5.1.1 Lollipop hanadio tanteraka ny Oneplus 2 antsika avy amin'ny fanodinkodinana nataon'ireto fivarotana sinoa an-tserasera ireto, amin'ny fotoana iray hanitsiana ny fahalemen'ny Stagefright sy ny Certifi-Gate, ary hamaha ny olan'ny fanavaozana amin'ny alàlan'ny OTA amin'ny ho avy.
Tokony holazaina fa ity firmware ofisialy ity tsy hanafoana ny fiantohana ofisialy momba ny vokatra io ary koa inona hanaja ny rindranasa napetraka sy ny angon-drakitra misy ankehitriny.
Raha vantany vao sintonina ny firmware Oxygen OS 2.0.1 ofisialy ho an'ny Oneplus 2, dia tsy maintsy hanao izany fotsiny isika adikao io raha tsy decompressing ao amin'ny folder Downloads an'ny Oneplus 2 ary araho ny dingana izay asehoko amin'ny horonan-tsary mifatotra amin'ny lohatenin'ity lahatsoratra ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » OnePlus » Vahaolana amin'ny fanavaozana ny olan'ny Oneplus 2 amin'ny alàlan'ny OTA
pepelradio dia hoy izy:
Mahazo lesoka aho rehefa manandrana mamoaka azy io
Mamaly an'i pepelradio
Nosintomiko ilay rakitra, iray monja no nakarina fa tsy roa toy ny ao amin'ilay horonan-tsary. Nametraka azy aho ary izao raha manana ny kinovan'ny oxygen OS 2.0.1 fa ny telefaona dia mbola afaka misintona azy amin'ny alàlan'ny ota, misintona azy aho ary tsy afaka mametraka azy.
Araho ny dingana ataonao ary havaozy ny rafitra fiasa ary ankehitriny ny terminal dia miasa toy ny diky, tsy mandeha tsara ny fandraisana data, rehefa eo amin'ny faritra 3g aho dia manamarika H fotsiny ny telefaona finday ary rehefa ao amin'ny faritra 4g aho marika LTE ary Indraindray ny latsaka ny tamba-jotra data, tsy afaka mamindra ireo, ankoatry ny fanovana avy amin'ny wi-fi mankany amin'ny angona finday, dia tsy mifandray tsara, miaraka amin'ny kinova android teo aloha izay nitondra fahagagana, olana ankehitriny, ratsy ratsy….
Nanaraka ny dingana rehetra aho ary tsara, saingy milaza amiko fa manana fanavaozana miandry 8.9mb (¿¿???) aho ary rehefa milaza azy hanavao aho dia tsy nahomby toa ny taloha intsony (¿¿???) Ankoatra ny very fiteny aho (ohatra tsy misy izao ny litoanianina)
Nosintomiko ilay rakitra, iray monja no nakarina fa tsy roa toy ilay ao amin'ny horonan-tsary. ny iray izay tsy misintona ahy dia ny oneplus2oxygen_14.zip. Mahasoa ve ny fanaovana azy io amin'ilay mampidina ahy ahy fotsiny sa tsy maintsy ho izy roa?
Misaotra tamin'ny hafatrao.
Nanaraka ny dingana rehetra aho ary tena nahitsy.
Saingy mbola tsy nahomby ilay fanavaozana vaovao, taorian'ny fanavaozana. Manana hevitra ve ianao ny antony mety hitrangan'izany?
Izaho indray izao ... [VAHAOLANA] Aorian'ny fametrahana ny ROM feno, andraso ny fanavaozana ny rindranasa rehetra. Rehefa vita ny fampiharana dia apetraka ny fanavaozana. ARY VOILÁ! Tsy misy soritr'orinasa romana. Misaotra hatrany amin'ny fanampianao!
JavierRamos (@CurranteLiberal) dia hoy izy:
Misaotra betsaka anao niverina tamin'ny fanazavana azy ireo, satria ny zavatra nitovizany tamiko, ary novakiako ianao ary novako araka ny nolazainao, manavao ireo fampiharana.
Mamaly an'i JavierRamos (@CurranteLiberal)
Bea, nampidina ireo rakitra 2 ve ianao? Azonao hazavaina ve ny fomba nataonao tamin'ny antsipiriany?
Liliana dia hoy izy:
Nividy ny findaiko tamin'ny fanasana aho ary rehefa tonga ny fanavaozana ny telefaona dia tsindrio aho, ary tonga ny fametrahana, nomeko azy io, fa ny telefaona nijanona tamin'ny triangles sy kodiarana nandritra ny adiny roa ary tsy nanao na inona na inona.
Novonoina tanana ny telefaona, inona no tokony ataoko?
Valiny tamin'i Liliana
Iray monja ny fampidirako rakitra, azo atao amin'ny iray ihany ve izany? sa aiza no ampidiko ilay tsy hitako?
Markiky dia hoy izy:
Voavaha, miaraka amina fisie tokana dia ampy handao ny OP2, mila manao izay voafaritra ao anaty horonan-tsary fotsiny ianao, rehefa vita miaraka amin'izany dia miandry ny fanavaozana ny rindranasa rehetra an'ny fitaovana ianao raha sanatria tsy mahavita azy mandeha ho azy, miditra ny fampiharana fivarotana ianao ary mitady ny safidin'ny rindranasa sy ny lalao, rehefa ao anatiny dia kitiho ny fanavaozana ny zavatra rehetra ary dia izay. Ny OTA dia alaina toy ny mahazatra ary hanavao ny telefaona tsy misy olana lehibe.
Valiny tamin'i Markiky
Salama daholo! Manana fanontaniana maika aho. Raha manana OxygenOS 2.1.0 aho, ahoana no hataoko? Izany hoe, tokony apetrakao ve ny OxygenOs 2.0.1 ofisialy? Sa mila mametraka iray aorian'ny 2.1?
Eugene21 dia hoy izy:
Salama. Nividy ny finday tamin'ny gearbest aho iray volana lasa izay, ary ny kinovan'ny Oxygen dia 2.1.0, saingy manome lesoka ahy amin'ny fanavaozana ny 2.2.0. Toy izany koa? Misintona ahy izy io, ary rehefa apetraka dia averiny aho, ary manome lesoka. Ary isaky ny roa isaky ny telo dia mahazo doka eo amin'ny efijery aho. Raha manao izay lazainao aho dia very ny data ananako amin'ny findaiko (sary, mozika ...) ???
Valiny tamin'i Eugenio21
Ny Moto 360 2015 vaovao dia haseho amin'ny 8 septambra